PressReader - Isolezwe: 2018-07-13 - Badube izimvume osomabhizinisi
Badube izimvume osomabhizinisi
Isolezwe - 2018-07-13 - IZINDABA - PHILI MJOLI
BADUBE izimvume zokudayisa ema-tuckshop osomabhizinisi basemalokishini asenhla neTheku obekumele bazokwemukela izimvume zabo, KwaMashu, izolo.
Labo somabhizinisi bebegcwele ngaphandle kwehholo lakwaL KwaMashu, esikhundleni sokuthi bangene ehholo ebezokwemukela kulo izimvume ebezizokhishwa imeya kamasipala weTheku, uNkk Zandile Gumede, bame ngaphandle kwesango becula iziqubulo ezithi osomabhizinisi bangaphandle abahambe.
Abanye bebesho kugcwale umlomo ukuthi akekho umuntu wangaphandle kwaleli ozohweba ezindaweni zabo.
UMnuz Mandla Sibaya iphini likasihlalo kasoseshini wosomabhizinisi basenhla neTheku, iNorth Region Business Association(NORBA) uthe ngeke bakwazi ukwamukela izimvume ekubeni bengawutholanga umbiko ochaza ukuthi abantu bangaphandle abahweba emalokishini, abakumaphi amazwe, abanazo izimvume zokuba kuleli nokuthi basebenzisa ziphi izindlela emabhizinisini abo.
Uthe ngesikhathi kuvakashelwa izitolo abomnyango wezasekhaya abakaze babe yingxenye yalolu cwaningo.Okwenza ukuthi babe manqikanqika ukuthi lolu hlelo lwenziwe ngendlela engafanele.
Uthe babethe amabhizinisi abokufika kuleli avalwe, singabi khona isitolo esisha esivulwayo ngesikhathi kusaqhutshekwa nohlelo lokucwaninga kodwa umasipala wabashaya indiva.
Uthe uMnuz Mlu Ntombela obethunywe imeya yeTheku, abasazimisele ukukhuluma naye, nayo imeya uNkk Zandile Gumede, abasafuni ukukhuluma nayo, ngisho noNgqongqoshe wezoMnotho KwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala abazimisele ukukhuluma naye bafuna uNdunankulu.
UMnuz Sipho Kaunda usihlalo wekomiti lezokuthuthukiswa komphakathi kumasipala weTheku, uthe uhlelo lokuthi kubhekwe bonke osomabhizinisi lwenziwe kwaze kwafinyelelwa esinqumeni sokuthi ababefake izicelo kuqala abangu-391 banikwe izimvume zabo.
UMnuz Thulani Nzama wophiko lwamabhizinisi lwakamasipala weTheku, uthe ngeke bakwazi ukunqabela osomabhizinisi bangaphandle ukuthi basebenze emalokishini ngoba lokho kuyaphambana nomthetho wezwe.
Lo mcimbi awubange usaqhubeka.UNdunankulu uMnuz Willies Mchunu uthe usebize umhlangano ophuthumayo wabo bonke abathintekayo, ukuze bazochaza ngohlelo lokwethula umbiko ngocwaningo lamabhizinisi abangaphandle okuthiwa seqiwe.